धातु सोफा पैर, धातु तालिका पैर, टेबल फ्रेम - GeLan
+86 13 13445550०448
धातु टेबल खुट्टा
समायोज्य टेबल खुट्टाहरू
कफी टेबल खुट्टा
GeLan हार्डवेयर सयौं धातु फर्नीचर खुट्टा प्रदान गर्दछ। करीव %०% पलंग खुट्टाहरू हुन्, %०% टेबल खुट्टा हुन्, र १०% टेबल फ्रेमहरू हुन्। .Metal सोफा / टेबल खुट्टा विकल्पहरूको एक विस्तृत विविधता तपाइँको लागि उपलब्ध छ, जस्तै हेयरपिन, त्रिकोण र टेपर्ड। तपाईं टेबल, सोफा, र क्याबिनेटबाट पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै धातु, स्टेनलेस स्टील, र। धातु सोफा खुट्टाहरू घर, अफिस वा बैठक कोठामा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कालो तालिका लेगहरू आधुनिक धातुमा आइरनको फर्न ...
हेयरपिन लेग्स वी आइरन स्टील भोजनालय कफी दिन ...
सोफा लेग्स फर्नीचर भागहरू कालो राउन्ड कफी ca ...
धातु फर्नीचर खुट्टा
धातु फर्निचर खुट्टाले आधुनिक फर्नीचरको लागि एक स्टाइलिश विकल्प प्रदान गर्दछ, वा परम्परागत सोफा र कुर्सीहरूको लागि आधुनिक भावना प्रदान गर्दछ। बिभिन्न आकारहरूले टेरेर्ड खुट्टाहरू, गोडा खुट्टाहरू र हेयरपिन खुट्टाहरूसहित विभिन्न शैलीहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। यी उच्च-गुणवत्ता वाले फर्नीचर खुट्टाहरू सोफे, भोजन टेबल, क्याबिनेटहरू, कफि टेबलहरू र अन्य फर्नीचरका लागि धेरै उपयुक्त छन्। फलाम वा स्टेनलेस स्टीलको बनेको। तपाईंको फर्निचर फिट गर्न विभिन्न आकारहरू बनाउनुहोस्। हाम्रो फर्निचर खुट्टा सबै फर्नीचर मा स्थापना गर्न सकिन्छ कि भनेर सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक आकार को एक श्रृंखला प्रदान गरीन्छ।
धातु सोफा खुट्टा
हाम्रो कम्पनी एक पेशेवर निर्माता हो मध्यम र उच्च गुणस्तरको हार्डवेयर उत्पादनहरू उत्पादन गर्ने पेशेवर प्रविधिहरू द्वारा, २२ वर्षको लागि उत्कृष्ट उधारो।
GeLan औद्योगिक कं, लिमिटेड फर्नीचर हार्डवेयर उत्पादन मा २० बर्षको अनुभव संग एक कम्पनी हो। यो सियानान औद्योगिक क्षेत्र, युआन्झाउ टाउन, बोलुओ काउन्टी, Huizhou शहरमा अवस्थित छ। यो तीन प्रमुख शहरहरु को नजिक छ - Huizhou, Dongguan र शेन्जेन प्रान्त। यातायात धेरै सुविधाजनक छ। वर्तमानमा, हामीसँग 000००० वर्ग मिटर कारखाना भवनहरू छन्। मुख्य उत्पादनहरू हुन् सोफा खुट्टा(पलंग खुट्टा) र टेबल खुट्टा, टेबल फ्रेम, क्याबिनेट खुट्टा, ओछ्यान फिट, जडान टुक्रा, सोफा हेडरेस्ट्स र अन्य फर्नीचर हार्डवेयर, र सबै प्रकारका हार्डवेयर उत्पादनहरू अनुकूलित गर्न स्वागत छ। बजार नेटवर्कले यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र घरेलु प्रसिद्ध उद्यमहरूलाई समेट्छ।
आर्थिक, स्थिर र बलियो धातु फर्नीचर फिटको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ? GELAN मा उत्तम धातु फर्नीचर फिट अन्वेषण गर्नुहोस्। हामीसँग विभिन्न प्रकारका खुट्टा छन्, जस्तै फर्नीचर सोफा खुट्टाहरू, टेबल खुट्टाहरू, कफी टेबल वा टेबल स्ट्यान्डहरू! GELAN एक फर्नीचर खुट्टा आपूर्तिकर्ता हो, फर्नीचर फुट को एक मूल्य लाभ र गुणवत्ता आश्वासन को खरीद छ। यो तपाइँको आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलन पनि गर्न सकिन्छ। GELAN हेयरपिन पैर, फोल्डिंग खुट्टा र समायोज्य खुट्टा सहित छनौट गर्न धातु फर्नीचर लेगहरूको विविधता छ। तपाईं विभिन्न शैलीहरू र कफी टेबल लेगहरूको प्रकार, टेबल खुट्टा र सोफा टेबल खुट्टाहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि सजिलै फर्निचरलाई अनुकूलित गर्न सकियोस् र तपाईं के चाहनुहुन्छ ठ्याक्कै हेर्नुहोस्। मेटल टेबल (सोफा) पैरहरु कडा र टिकाऊ छन्, तपाईको भावनाको लागि धेरै समर्थन प्रदान गर्दछ। मेटल टेबल लेग्स कफी तालिकाहरू, डेस्क र वर्कबेन्चहरू मुनि उत्तम देखिन्छन्।
कारखाना प्रत्यक्ष चीन आरवी स्टेपलेस उचाई Adjus ...
लगातार प्रबन्धन प्रक्रिया सुधार गर्न ...
शीर्ष आपूर्तिकर्ता चीन स्टेनलेस स्टील समायोज्य एफ ...
हामी हाम्रो व्यापारलाई उत्तम र उत्तम राख्दछौं ...
कफी टेबल राउंड मार्बल टेबलको लागि धातु फ्रेम ...
मौलिकता धातु फ्रेम टेबल गोल मार्बल Tabl ...
टेबल फ्रेम आधुनिक राउन्ड मेटल फ्रेम साइड टी चिया सी ...
कारखाना कस्टम निर्मित फैशनेबल धातु सोफा फुट ...
इस्पात तालिका लेग स्टेनलेस स्टील वर्क Rectangul ...
चिनियाँ आपूर्तिकर्ता कस्टम स्टेनलेस स्टील वर्क आर ...
धातु टेबल फ्रेम घर फर्नीचर राउन्ड कफी टी ...
घर फर्निचर राउन्ड कफी टेबल संगमरमरको शीर्ष गो ...
आधुनिक टेबल लेगहरू ठूलो आधुनिक वी आकारको फर्निटो ...
ठुलो आधुनिक वी आकारको फर्नीचर तालिका लेग सपो ...
आधुनिक धातुले आइरन फर्नीचर टेबल पैर
किन पातलो पैरको फर्निचर लेगहरु ...
एम स्थापना गर्न को लागी सावधानी के हो ...
के तपाईंलाई कफि टा जोड्नको लागि कुनै तरिकाहरू थाहा छ ...
उच्च ए बीचको भिन्नता के हो ...
ग्लास कफी टेबल पैर मर्मत कसरी गर्ने G ...
सिया'नान औद्योगिक क्षेत्र, युआन्झउ टाउन, बोलुओ काउन्टी, हुइझहू शहर, गुआंग्डोंग प्रान्त
हामीलाई अब कल गर्नुहोस्: +86 13 13445550०448